चन्दननाथ नगरपालिका मेयरका उम्मेदवार यूवा नेता जीवन बुढ्थापा को हुन ? — Breaking News, Headlines & Multimedia
कोरपाटी संवाददाताबैशाख १८, २०७९जुम्ला,
नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चन्दननाथ नगरपालिकामा नगरप्रमुखका उम्मेदवार ३६ बर्षिय जीवन बुढ्थापा मैदानमा उत्रिएका छन् ।
नगरप्रमुखमा बुढ्थापा र उपप्रमुखमा पूर्णिमा विक (रचना) यस पटक चन्दननाथ नगरपालिकाको उम्मेदवारको रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रले मैदानमा उतारेको छ । माओवादीले यूवा नेता बुढ्थापालाई प्रथामिकता दिएपछि नगरपालिकामा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा मेयर नेपाली कांग्रेस र उपमेयर नेकपा माओवादी केन्द्रले बिजयी हाशिल पारेको थियो ।
माओवादीले यूवा नेता बुढ्थापालाई नगरप्रमुखको टिकट दिएर मैदानमा उत्रेपछि नगरपालिकामा आफ्नो नेतृत्वको माओवादी पार्टी बिजय हुने दावी गर्नुभएको छ ।
को हुन जीवन बुढ्थापा ?
चन्दननाथ नगरपालिका २ निवासी जीवन बुढ्थापा हाल माओवादी केन्द्रका यूवा नेताहरु मध्य एक हुन् । २०५६ सालमा माओवादी यूद्ध तातिएको समयमा काठमाण्डौमा विद्यालयमा अध्ययन गर्दै जादा माओवादी निकट विद्यार्थीमा आवद्ध भएको उहाँको राजनितिक पृष्ठभूमि हो । सोही बिचारका आधारमा नेता बुढ्थापा कक्षा १० पढेको समयमा माओवादी विचारमा लागेको भन्दै २०५९ सालमा काठमाण्डौमा गिरफ्तारी परेका थिए ।
वि.सं २०५९ साल असार ३ गते गिरफ्तारी परेर नेपाली सेनाले ४४ दिन पछि हुनुमान ढोकामा जिम्मा लगाएको नेता बुढ्थापाले बताउनुभयो । बुढ्थापाले २२ दिन हनुमानढोका परिसर हुदै १३ महिना जेल जीवन विताएका थिए ।
शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीको विभिन्न पदमा आवद्ध हुदै आएका बुढ्थापाले काठमाण्डौ जिल्लाको जिल्ला कमिटि, नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय आयोजक कमिटि, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधी, नेकपाको जिल्ला कमिटि हुदै राजनितिक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले यस अघि कर्णाली माध्यामिक विद्यालय अनामनगरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुदा पनि लोकप्रिय काम गरेको दावी गर्नुभयो ।
यस पटक पार्टीले यूवालाई दिएको जिम्मेवारीको पूर्ण पालना गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस कारण नगरवासीले आफुलाई मत दिने आशा र अनुरोध पनि गर्दछु, उहाँले भन्नुभयो । यस पटक पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको रोचक प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । माओवादी र कांग्रेसको मात्रै होईन नेपाली कांग्रेसका बलिया नेता राजुसिहं कठायतको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेपछि कांग्रेसमा तरंग छाएको छ ।